DF oo shaacisay in aysan waxba u qaban karin Soomaalida ku xayiran Liibiya | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Wararka Maanta DF oo shaacisay in aysan waxba u qaban karin Soomaalida ku xayiran...
Safiirka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya u jooga wadanka Liibiya, Mudane Muxudiin Maxamed Kaalmoy oo wareysi siiyey VOA ayaa ka hadlay xaaladda Soomaalida faraha badan ee haatan ku xayiran gudaha dalka Liibiya.
Kaalmoy ayaa sheegay in ay ka war hayaan xaaladda Soomaalidaasi oo dhalinyaro u badan, balse wuxuu tilmaamay in aysan heyn dhaqaale ay wax ugu qabtaan.
Sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in sababta ugu weyn ay tahay xayiraada caalamiga ah ee haatan saaran dalalka kala duwan ee caalamka, taas oo la xiriirta Coronavirus.
Dhinaca kale mid ka mid ah dhalinyarada ku dhibaateysan Liibiya, gaar ahaan caasimadda dalkaasi ee Tripoli oo isna la hadlay VOA ayaa ka warbixiyey xaaladdooda, wuxuuna sheegay in muddo shan bilood ah ay duruufu adag ku heystaan dalkaasi.
Wiilkaan dhalinyarada ah oo sii hadlayey ayaa carabka ku dhuftay inay dalbadeen in dib loogu celiyo dalkooda, balse ay waayeen cid u jawaabta, sida uu hadalka u dhigay.
“Lacag badan ayaan ku bixinay sidii aan u gaari lahayn Liibiya oo aan kaga sii gudbi rabnay Yurub, balse waxa aan la kulanay dhibaato nafsadeed oo nagu sababtay in aynu doorano dib ugu laabashada dalkeena oo aan kolkii hore kasoo tagnay, waxa aan dalbaneynaa in naloo fududeeyo dib ugu laabashada Somalia.” ayuu wareysiga ku yiri.
Liibiya ayaa marin u noqotay tahriibayaasha ka cararaya qaaradda Afrika, kuwaas oo doonayay inay gaaraan dalalka Yurub, si ay helaan nolol dhaanta tan Afrika, hayeeshee muhaajiriintaasi oo Soomaali ay ku jirto ayaa dhibaatooyin kala kulma safarkaasi dheer.
Previous articleWHO announces ‘historic’ testing of four COVID-19 drugs
Next articleMucaaradka DF oo ka cabsi qaba bandow ay sheegeen inuu kusoo socdo Muqdisho
Cabdi Xaashi oo ka hadlay arrimaha xasaasiga ah ee doorashooyinka 2020/2021
Janan oo hub iyo lacag laga soo siiyay Nairobi oo dhoola-tus ka wada Beledxaawo
Xog: DF oo xaalad dagaal gelineysa dalka ka hor inta aan laga gaarin doorashada
Janan oo hub iyo lacag laga soo siiyay Nairobi oo dhoola-tus...
Xog: DF oo xaalad dagaal gelineysa dalka ka hor inta aan...
Xildhibaanada iyo wasiirada Hawiye oo kulan xasaasi ah xalay ku yeeshay...
Yusuf Garaad oo farriin u diray Baarlamaanka (Xildhibaanow Xusuusnow)
Two Somali nationals escape from quarantine in Masindi
Erdogan oo maray wacad la xiriira magaalada Qudus
Mareykanka iyo Itoobiya siyaasaddooda Soomaaliya ma is xambaar baa? Qeybta 1-aaad
Midowga YURUB oo war ka soo saaray waqtiga loogu daray in...
Xog: Beesha Habar-gidir oo gaari aysan xabada karin u iibisay Janaraal...
xogdoonnews - May 28, 2020